Inona no tsy mety amin'ny Foursquare? | Martech Zone
Alakamisy, Aprily 7, 2011 Zoma, Aprily 8, 2011 Douglas Karr
Tsy tokony haka ny Foursquare fotsiny aho… Manana olana mitovy amin'izany amin'ny ankamaroan'ny rindranasa media sosialy aho. Ny olana dia iray ihany amin'ny sehatra sosialy rehetra. Amin'ny Foursquare, miharihary kokoa ny olana. Te hanararaotra ilay lampihazo ny orinasa - saingy tsy misy fomba hanaovana izany.
Vokatr'izany dia mahazo bontolo toy izao ianao… orinasa sasany izay tsy eo akaikiko ary tsy misy fifandraisako amiko, mangataka ahy ho sakaizan'izy ireo.
Misy foana ny mety ho spammer, fa tsy dia azoko antoka. Izy io dia mety ho orinasa iray nikendry ahy ary maniry ny hanana fifandraisana amin'izy ireo. Ny tena olana dia mazava ho azy fa tsy misy fomba ahafahan'izy ireo manao izany amin'ny alàlan'ny Foursquare - noho izany dia mila mampiasa an'io fomba io izy ireo.
Ny fifandraisana misy eo amin'ny orinasa sy ny mpanjifa dia mila atsahatra amin'ny fiheverana azy amin'ny famoronana sehatra media sosialy vaovao. Toa ny orinasa ihany no omena ny fahafaha-manao amin'ireo orinasa ireo dia rehefa misy ny filàna miteraka fidiram-bola. Noho izany ny Foursquare manokana.
Raha orinasa aho dia afaka mandefa manokana ao amin'ny Foursquare mba hanararaotan'ireo mpanjifa… rehefa miditra izy ireo. Misy olana hafa koa ao amin'ny Foursquare. Ny ankamaroan'ny orinasa dia tsy mila mitaona ny mpanjifa rehefa efa namaky ny varavarana teo aloha ry zareo - ny mahazo azy ireo no olana ny ny varavarana fidirana.
Foursquare dia tsy mahita fotoana lehibe eto. mpanjifa te hifandray miaraka amina orinasa - tsy mitovy amin'izany ny fangatahana sy dokam-barotra ataon'ny orinasa. Tsy mandeha ny doka… mandeha ny fifandraisana. Ahoana kosa raha Foursquare, nanome anao interface tsara madio ianao hahitanao ireo toerana manodidina anao izay matetika matetika indrindra ataon'ny namanao - miaraka amin'ny fitaovana fizarazaran-toerana ahafahanao mampisaraka ny karazan'orinasa.
Ary ahoana raha nomen'ny Foursquare ny orinasa hamoaka tolotra amin'ny tambajotran'ireo namanao ary asaivo manatevin-daharana anao izy ireo rehefa manamarina ianao? Ankehitriny dia ho fitaovana ankafizin'ny orinasa sy ny mpanjifa izany!
Apr 8, 2011 ao amin'ny 12: PM PM
Angamba antony iray hafa mila mamantatra sy mamolavola ity fampiharana finday ity aho nandritra ny fotoana kelikely.